Cavani: “Sanchez iyo Aubameyang wan kusoo dhawaynayaa Paris.” | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Cavani: “Sanchez iyo Aubameyang wan kusoo dhawaynayaa Paris.”
Cavani: “Sanchez iyo Aubameyang wan kusoo dhawaynayaa Paris.”
Posted by: radio himilo May 16, 2017
Muqdisho – Laacibka Paris Saint-Germain, Edinson Cavani ayaa sheegay inuu soo dhaweyn lahaa laacibiinta Alexis Sanchez iyo Pierre-Emerick Aubameyang kooxdiisa – haddii ay imaanayaan xagaaga soo socda.
Laacibiinta lala xiriirinayo kooxda Paris xagaaga soo aadan waxaa kamid ah xiddiga Arsenal, Sanchez iyo laacibka Borussia Dortmund, Aubameyang – Cavani kaas oo 49 gool xagaagan u dhaliyay kooxdiisana wuxuu sheegay inuu jeclaan lahaa imaanshahooda.
“Haddii ay la saxiixdaan, waa lasoo dhaweynaya,” ayuu u sheegay Canal +. “Waxaan halkan u joognaa kooxda. Laacibiinta fiicanna, waxay u joogaan kooxda.”
Hadana wali wuxuu aaminsan yahay in kooxdiisu ay ka fiican tahay Monaco – u eegis la’aan xagaaga lagu jiro.
“Dhamaadka finaalihii Coupe de la Ligue oo aan la kulannay Monaco wuxuu ahaa waqti fiican,” ayuu ka yiri kulankii 4-1 kusoo adkaadeen Lyon. “Maalintaas waxaan muujinnay inaan aad uga weynnahay iyaga.”
Previous: Sama-falayaasha Fardooleyda Jidadka – The Knights of Roads.